Sawirro: Guddoonka Guddiyo Kale Oo Doorasho Oo Maanta Lagu Doortay MUQ...
Sawirro: Guddoonka guddiyo kale oo doorasho oo maanta lagu doortay MUQ…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Galmudug, ayaga oo cod gacan taag ah ku doortay Gudoomiyeyaal iyo ku-xigeenada Guddiyada.
Xubnaha Guddiga ayaa Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Koonfur Galbeed u doortay Yuusuf C/qaadir Maxamed Baffo oo asagu helay codad gaaraya 10-cod, halka Maxamed Isxaaq oo la tartamayey uu helay 1-cod oo keliya.
Sidoo kale waxaa Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan oo asagu helay codad gaaraya 9-cod, halka uu C/llaahi Cabdi Mudalib oo kursigaas u tartamayey uu helay 2-cod.
Wararka Maanta : Xog: Al-Shabab oo u yeeray macallimiinta dugsiyada ay maamusho DF Soom...
Doorashada uu maanta qabtay guddiga ayaa hogaan cusub oo rasmi ah u yeelaysa Guddiga Doorashooyinka Koonfur Galbeed, waxaana dhawaan la filayaa in guddiyada maamulada ay iskugu imaadan kulamo ay ku dooranayaan guddoonkoda.
Sidoo kale, magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshsy Guddiga Hirgelinta Doorashada Galmudug, iyaga oo maanta doortay Guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa.
Xilka Guddoomiyaha iyo ku xigeenka ayaa waxaa isu-soo taagay musharixiinta kala ahaa: 1- Maxamed Daahir Guuleed, guddoomiye, 2- Saacid Aadan Jaamac. Ku xigeen.
Madasha Doorashada xubnaha soo xaadiray ayaa gaarayay 11 xubnood, waxaana Maxamed Daahir Guuleed ay u doorteen Guddoomiye, isaga oo helay 11 cod Mana jirin qof la tartamay. Sidoo kale Xubnaha Guddiga ayaa Saacid Aadan Jaamac waxaa ay u doorteen Guddoomiye Ku xigeen, isaga oo helay 11 cod, mana jirin qof la tartamay.
Maamulada Puntland, Hir-Shabeelle, Jubbaland, kuwa Banaadiriga iyo Gobolada Waqooyi oo loo yaqaan hadda Somaliland ayaa ayagu maalmaha socda lagu wadaa inay doortaan guddoomiyeyaal iyo ku-xigeenadooda.
Wararka Maanta : Uhuru Kenyatta: ma dhiibeyno hal Inji oo dhulkeenna ah - Caasimada Onl...
Wararka Maanta : Xildhibaano la saftay Biixi oo wajahaya 'cawaaqib adag' - Caasimada On...
Wararka Maanta : Deg Deg: RW Rooble oo qaadaya talaabo uu ku difaacayo MD Farmaajo &...
Wararka Maanta : Wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay Magaalada Dubai - Radio...
Wararka Maanta : Deg Deg: Mucaaradka oo ku hanjabay inay isaga bixi doonaan tartanka, Guusha...